Yintoni iAdobe Kuler | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UAntonio L. Carretero | | Ezahlukeneyo
I-Adobe Kuler sisicelo esikwi-intanethi esenziwa ngabafana Inkqubo ye-Adobe yenza ukuba kufumaneke eluntwini ngaphandle kwentlawulo. Esi sicelo sisetyenziselwa ukwenza iiSwatch, okanye iMibala yePalettes okanye iMidlalo yeMibala, ngamafutshane, ikunika imibala emi-5 ehamba nenye oyikhethayo njengombala osisiseko. Mkhulu akunjalo? ...
Namhlanje ndiza kubonisa isicelo se-intanethi kunye nendlela yokuqalisa ukusebenza nayo, kwaye kwisifundo esizayo ndiya kukufundisa ukuba usebenze ngezinye iindlela kunye nesicelo esihle. Ngaphandle kokuqhubela phambili ndikushiya nomnyango, Yintoni kunye nendlela yokusebenzisa iAdobe Kuler.
Kwisifundo esingaphambili, Uyenza njani iibrashi kwiAdobe Photoshop, ndikunike ulwazi oluthe kratya malunga nezixhobo zokuzoba zeFotohop. Jonga ukuba uya kuthanda ngokuqinisekileyo.
Siza kukhetha umbala esiza kuwufumana kusetyenziswa isixhobo sokuLahla into esiya kuyenza kwaye siza kuzobala uluhlu lwemibala ehambelana neAdobe Kuler, ukuze siyisebenzise kamva kwinqanawa.
Sivula i-Photoshop kwaye sikhethe isixhobo se-Eyedropper.
Siya kumfanekiso othile kwaye sifumana umbala kuwo nge-Eyedropper. Ndikhethe umfanekiso ongaphezulu, kwaye kuwo, luhlaza okwesibhakabhaka we logo ye-Kuler.
Nje ukuba sifumane umbala, siwubona kwibhokisi yombala ongaphambili, singena kuMkhethi weMibala kwaye sijonge inani le-hexadecimal. Siyikopa kwifayile ye- clipboard ngokwenza CNTRL + C
Siya kwiphepha leAdobe Kuler.
Sijonge iChromatic Roulette.
Sahamba kwenye yeebhokisi ezintlanu ezantsi kwayo, ngakumbi leyo enentolo enonxantathu eyalathe phezulu, Eyichaza njengombala osisiseko. Iya kuba ngumbala webhokisi ephakathi.
Sincamathisela i-hexadecimal kwibhokisi ehambelana nayo, apho ithi Hex. Sibetha iqhosha lokungena.
Siza kuba nomdlalo we imibala emihlanu ngokuvisisana okugqibeleleyo.
Sivavanya imigaqo eyahlukeneyo yemibala esisicelo esisinikwa kwangaphambili.
Sihlala kunye nalowo simthanda kakhulu.
Ngoku masiyise kwi-Photoshop.
Sithiya iphalethi yombala kwaye siyinika ukugcina.
Iya kusisa kwiscreen esitsha, apho siya kuba nayo ngaphandle kwemibala emihlanu egciniweyo eyenza olo luhlu, imenyu yokukhetha.
Cofa kwindawo yokukhuphela.
Nje ukuba sikhutshelwe, siyifaka kwifolda kwi Amaxwebhu am anegama leMibala.
Siya kwiFotohop, ngakumbi iphalethi yeSwatches.
Cofa kwikona ephezulu ngasekunene kwiphalethi ukufumana imenyu yokukhetha.
Sikhetha ukhetho Iisampulu Layisha.
Siya kwifolda yethu yemibala. Ngezantsi kwebhokisi yencoko yencoko, kwiNketho yohlobo, ephantsi kwegama lokukhetha, sikhetha uhlobo lwefayili ukuba ilayishwe. Sikhetha Utshintshiselwano ngeSampulu, enolwandiso lwefayile ye-ASE.
Silayisha ifayile ye- ifayile equlathe uluhlu lwethu.
Ewe, sele sinayo kwiisampulu zeesampulu. Ukusebenza nayo kuthethiwe.
Ewe apha siyayiphelisa le tutorial. Kuza ngokukhawuleza Ndizakuzisa enye eneenketho ezininzi zeKuler. Ndiyathemba ukuba iluncedo kuwe, kwaye ukuba unamathandabuzo okanye imibuzo, yenze ngokukhululekileyo nokuba kungagqabaza ngayo isifundo seVidiyo okanye kwiphepha lethu likaFacebook.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Yintoni kunye nendlela yokusebenzisa iAdobe Kuler